2 febroary: ny nanolorana ny Tompo – Trinitera Malagasy
Malakia 3, 1-4/
Hebrio 2, 14-18/
Md Lioka 2, 22-40
40 andro aorian’ny fahaterahana araka ny lalàn’i Moizy (Levitika 12, 1-8) dia mila miakatra any an-tempoly ny renin-jaza mba hidio, ary araka ny Boky Eksaody kosa, indrindra ny Eksaody 34,20 dia mila havotana ny lahimatoa rehetra amin’ny zanaka. Fanahy inian’i Md Lioka ve sa sanatria tsy fahaizana ny nanafangaro ny fanatitry ny fidiovana sy ny fanolorana ny zaza? Ataoko fa mba hilazany amintsika fa tsy azo avotana ny zanaka fa mijanona ho zanak’Andriamanitra mandrakizay, apetrany hokolokolointsika, ary i Jesoa kosa, natolotra mba ho “fahazavan’izao tontolo izao”, fahazavana hanilo ny Jentily (Tononkiran’i Simeona).
Dia izay no ankalazain’ny Fiangonana amin’ny Fetin’ny 2 febroary, satria i Jesoa ilay masoandro miposaka mba hanazava ireo ao anatin’ny aloky ny fahafatesana (Lk 1, 78-79) no indro atolotra ka raisin’ireo niandry azy am-pitokiana: Simeona sy Ana. Fetin’ny fihaonana izy ity tany amin’ny taonjato faha-efatra tany fa taoriana kosa, ny taonjato fahafito dia lasa fetin’ny fidiovan’i Masina Maria izay nankalazaina ny hariva miaraka amin’ny labozia, ka nantsoina hoe “Candelora”, fetin’ny Jiro Masina. Raha ny tena marina manko, ny alin’ny Paka no ankalazana an’i Kristy fahazavan’izao tontolo izao, Izy ilay “hazavana natao hanilo ny firenena”.
I Jesoa no ilay masoandro miposaka mba hanazava ireo ao anatin’ny aloky ny fahafatesana (Lk 1, 78-79) no indro atolotra ka raisin’ireo niandry Azy am-pitokiana: Simeona sy Ana. Raha ny tena marina anefa, ny alin’ny Paka no ankalazana an’i Kristy fahazavan’izao tontolo izao, Izy ilay “hazavana natao hanilo ny firenena”, saingy tsy afa-misaraka ny misterin’ny fahatongavana ho nofo sy ny misterin’ny Paka nampisy heviny azy.
Mahalala antsika tsirairay avy Andriamanitra ary mahafantatra ny antsimpirihim-piainantsika (salamo 138), ary nofidiany isika tsirairay avy ho fitaovana hitaran’ny famonjeny ho an’ny olombelona rehetra. Tsy afaka ny tsy haniry izany famonjena izany izay rehetra aterak’Andriamanitra ka mahatsiaro tena fa asan-tanany maha-te hidera sady mahatalanjona. Izy no maniraka ny irany, hamboatra ny lalana ho Azy. Izany faminanian’i Malakia (מַלְאָךְ mal’ak, iraka) izany no lazain’i Jesoa fa tanteraka tamin’ny nahatongavan’i Joany Batista (Mt 11, 10; Mk 1, 2; Lioka 1, 7). Ary ho tonga tampoka ao an-tempoly ny Tompo tadiavinareo. Ny teny nadika hoe “tampoka” moa, dia פִּתְאוֹם (pith’ôm) izay ilazana ny hafainganan’ny fahatongavany no hilazana koa fa eo akaikintsika eo ilay andrasana. Tsy kisendrasendra araka izany no nahatongavan’ny Tompo tampoka fa noho Izy efa eo akaiky eo, ho avy hanadio ny fontsika mba hahafahantsika manolotra sorona araka ny lalàna, izany hoe hampifanaraka ny fiainantsika amin’ny fankalazana izay ataontsika. Izany no fanatitra ara-drariny.
Niandry ny Mesia Israely, saingy indrisy fa mpamonjy nifanaraka tamin’ny sitrapon’izy ireo no notadiaviny. Ambaran’i Lioka amin’ity sombin’ny Evanjeliny atolotry ny Litorjia hodinihintsika ity fa izay maharitra amin’ny vavaka sy ny fitiavana ihany no afaka hahalala ka hankalaza ilay Zanak’Andriamanitra, Mesia nirahiny hamonjy antsika, satria ireo ihany no manaiky hotarihin’ny Fanahy Masina.
I Simeona dia lehilahy marina sy tia vavaka ary niandry ny andro ampiononana an’Israely. Izay tsy maharitra, hoy ny Ntaolo dia vadin’ikotokely fa ny maharitra no vadin’andriana. Ny tsy faharetantsika anefa mety haniraka hioty salohim-bary mbola tsy matoy, mety haniraka antsika hitady lalana any an-kafa ka hampivily lalana, hanjary hitoky bebe kokoa amin’ny herin’olombelona fa tsy amin’ny herin’Andriamanitra. Izay matoky fa tsy mivadika Andriamanitra no afaka higoka ny hafaliana avy amin’ny famangiany ka hiaina am-piadanana. Ny vavaka sy ny fiainam-pahamarinana mifanaraka amin’izany no lalana mitondra amin’izany fitokisana izany, tsy maintsy mandalo amin’ny fanapahan-kevitra hentitra sy matotra anefa, satria i Jesoa dia ho zary famantarana hotoherina mba hiseho ny hevitry ny fo maro (Lk 2, 35).
Izany hevitry ny fo izany no hahafahana mahazo ka handray ny torohevitr’i Joany amin’ny Taratsiny voalohany: aza tia an’izay tontolo izao na ny zavatra amin’izao tontolo izao, izay zavatra mandalo ihany, fa hikatsaka ny sitrapon’Andriamanitra izay manorina sy mampaharitra antsika ao amin’ny fitiavany mandrakizay. Tsy misy lalana hahafahana mahafantatra ny sitrapon’Andriamanitra ka handresena ny ratsy anefa raha tsy amin’ny fiezahana hahalala an’Andriamanitra bebe kokoa, amin’ny fampitoerana ny Teniny ao am-pontsika. Ny Fahalalana Azy no fiainana mandrakizay (Jn 17, 1ss)
Sokajian’i Joany telo moa ireo ratsy manandevo ny olona: ny “filan’ny nofo” moa dia entiny hilazana ny filàn’ny vatana izay efa tsy voafehin’ny olona intsony; ny “fitsiriritan’ny maso” te hahazo izay rehetra tazany, ἐπιθυμία(epithumia) no ampiasain’i Joany, amin’ny hoe filan’ny nofo sy fitsiriritan’ny maso, izany hoe faniriana miverimberina ka tonga fijaliana ny tsy fahatanterahany, ny fototen’io matoanteny io dia θύω (thuo), misy heviny roa: “sacrifier” – “s’emporter”, ka rehefa tsy mahazo izay ilainy araka izany ny nofo sy ny maso dia mety ho sorena na sanatria an’izany hahavita hanadino ny fitiavan’Andriamanitra mba hahazoana ny zavatra irina; ny zavatra fahatelo mampanalavitra amin’ny fitiavan’Andriamanitra dia ny “rehaka amin’izao fiainana izao” (ἀλαζονεία alazoneia), ny fitokisana amin’ny haren’ny tany hireharehana amin’ny mpiara-belona ka mampivily lalana sty hitokisana intsony amin’Andriamanitra.
Nolazaiko moa izany satria voalaza ihany koa fa andro natokana ho an’ireo olona nanokan-tena ny 2 febroary. Tsy ny relijiozy ihanya nefa no antsoina hanokan-tena fa ny kristianina rehetra, izay te hizotra ny lalam-pahasambarana. Izay mahita an’i Kristy ka mandray Azy ho Fahazavana no afaka hilaza tahaka an’i Simeona fa afaka mandeha am-piadanana amin’izay. Ny fahitana ny famonjen’Andriamanitra no mahafeno fatra ny fiainana.
Modely ho amin’izay fikatsahana sy fanananterahana ny sitrapon’Andriamanitra izany ilay mpaminany vavy tao an-tempoly: Ana, ilay “nosoavin’Andriamanitra” (חַנָּה), zanak’i Fanoela (פְּנִיאֵל Peniy’el, endrik’Andriamanitra) avy amin’ny fokon’i Asera (אָשֵׁר ‘Asher, sambatra, na ny marimarina kokoa, avy amin’ny foko izay mizotra amin’ny lalam-pahasambarana araka ny matoanteny hoe אָשַׁר ‘ashar) izay nanokana ny tenany ho an’ny vadiny 7 taona, ary rehefa maty vady dia tsy maimay tahaka ny vehivavy sasany nolazain’i Md Paoly hoe maty vady tanora (1 Tim 5, 11) fa nijanona nivavaka tao an-tempoly, ary efa 7X12 taona izy izao, hilazan’i Lioka ny fahamatoran’ny fitiavany, eny fa na dia anisan’ny fokon’i Asera izay foko kely indrindra ao amin’Israely aza izy. Izy no ilay Israely-Vady, izay tokam-po tahaka ny siny, naharitra tsy nivadika tamin’ny fitiavana. Sambatra ny toa azy, madio fo, fa afaka hahita an’Andriamanitra, haharitra amin’ny fifadian-kanina sy ny vavaka, fanefitry ny fitsiriritana satria hahaizana mamola-tena sy manitsy ny faniriana amin’ny lalam-pahasambarana atoron’ny Tompo. Efa miara-maty amin’i Kristy ny amin’ny fahotana isika, hoy i Paoly (Kol 3) ka tokony hitondra tena mendrika ny olom-boafidin’Andriamanitra sady masina sy malala (and. 12).
Ny fanambaran’i Simeona ny misterin’ny “hazofijaliana” no nahafahany nidera an’Andriamanitra tsy nandiso ny fanantenany. Izay mahatsapa fa ny fahotana dia manandevo fa tsy mahasambatra no afaka hisaotra an’Andriamanitra fa ny fahaterahan’ny Zanak’Andriamanitra Lahitokana no hanafaka antsika sy hitondra antsika amin’ny tena fahafahana marina. Manoloana ny misterin’ny Hazofijaliana, izay fandavoana sy fanarenana ho an’ny maro amin’Israely, dia voaantso isika rehetra, mba hahatsapa fa fahalavoana ny filomanosana amin’ny tontolon’ny ota ary fiarenana kosa ny fametrahana ny fitokisana eo an-tanan’ilay nanaiky hofantsihana ho antsika. Manoloana ny Hazofijaliana, manoloana ny fijaliana rehetra, tahaka an’i Masina Maria, dia tanterahin-tsabatra ny fanahintsika, ka miseho amin’izay maha-izy azy: na ho amin’ny fitiavana na amin’ny fitiavan-tena.
Amin’ity Evanjely ity i Lioka no mamarana ny fampidirany ny Evanjeliny ka hahafahan’izay manohy mamaky azy hahazo ny hevitr’izay nosoratany mba hinoantsika fa i Jesoa no ilay “Zanak’Andriamanitra” (Lk 1, 32-35), Zanaky ny Avo indrindra (Lk 1, 32), Mpamonjy teraka, dia i Kristy Tompo (Lk 2, 11), hazavana hanilo ny Jentily sy voninahitr’Israely (Lk 2, 32), ho famantarana hotoherina (Lk 2, 34), kanefa fanalana alahelo (Lk 2, 25) sy fanavotana an’Israely (Lk 2, 38). Izany rehetra izany anefa dia ambaran’i Lioka fa ao anatin’ilay fiainana maha-olombelona an’i Jesoa. Izany no fiekem-pinoana namafisintsika nandritra ny Noely, fety mifamatotra amin’ny fety anio, 40 andro aorian’ny nahafaterahan’i Jesoa, satria ilay Zanak’Andriamanitra, Andriamanitra avy amin’Andriamanitra, nisy talohan’ny taona rehetra dia tonga olombelona mitovy amintsika amin’ny zavatra rehetra. Izy no ilay Teny Andriamanitra, ka tonga nofo mba hiara-monina amintsika (Jn 1).
Izay mahatanteraka ny zavatra rehetra araka ny lalan’ny Tompo no ho afaka hiditra amin’ny hafenoan’ny fahendrena sy honenan’ny fahasoavan’Andriamanitra (χάρις charis), telopolo taona tao anatin’ny fahanginan’i Nazareta, no mandrafitra izany misterin’ny fahatongavana ho Nofo izany, nianaran’ilay zanak’i Maria ny fanekena, nitomboany fahendrena sy tena, ka nandrosoany mahate-ho tia tamin’Andriamanitra sy tamin’ny olona (Lk 2, 51-52) ka hahafahantsika mihanoka ao anatin’ny taom-pahasoavana ankehitriny.
Ny Jiro masina entina maneho ny Faminanian’i Simeona momba ilay fahazavana hanilo ny Jentily dia hahatsiarovantsika mandrakariva an’i Kristy Masoandrom-piainantsika.
Andro natokana ho an’ireo nanolo-tena manokana ho an’Izy Tompo (Relijiozy sy laika voatokana) koa anio, araka ny voalaza teny ambony. Misy heviny ny Fiainan’izy ireo rehefa tonga famantarana maneho an’i Kristy ilay Madio, Mahantra ary Manaiky, ka ho fahazavana hitarika ny olona hanantona an’i Kristy. Tsy sakana velively hanehoana ny famindrampo sy ny fitiavan’Andriamanitra ny halemen’olombelona, fa vao mainka aza hanamafy ny fitokisana sy ny fiankinam-po amin’ny fahasoavana, mahatsiaro tena fa « raha tsy Izy tsy mahefa na inona na inona » isika (Jn 15, 5), hany ka sady miatrika sy miaky ny fahalemen’ny tena no mizaka sy mahalefitra ny fetran’ny hafa, saingy tsy sasatra mitalaho ny fahasoavana, mba hahatongavana ho jiro manazava ny haizina ateraky ny fahotana eo amin’izao tontolo izao.
Ny fankalazantsika ny Eokaristia amin’izao Fetin’ny nanolorana ny Tompo izao anie hampitombo antsika koa amin’ny fitiavana an’Andriamanitra.